PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-10-28 - UKUDUDANA (PEER PRESSURE)
UKUDUDANA (PEER PRESSURE)
Asikho isihlava esedlula ukududana. Okokuqala umfundi adinga ukuba avuleke amehlo ngakho maqondana naleli phuzu wukuthi wonke umonakalo nezinqumo ezidukisayo neziphetha ngokushayeka empilweni, umfundi agcine esezisola eseyedwa, zibangelwa yikho lokhu.
Zonke izeluleko ezibhedayo nokuganga umuntu omusha akuthola esengene kukho akufiki kuye nomuntu oyisitha kodwa kufika nabangani.
Kusemqoka ukwazi ukuthi empeleni kumuntu omusha akekho ongaba nezeluleko ezinhle ukudlula ezomzali wakhe!
Cishe zonke nje izeluleko ezimbi zizalwa yikho ukududana. Phakathi kokunye kwalokhu singabala ukuqoma nokuzimbandakanya kwezoncansi kwabafundi nomphumela wakhona owukukhulelwa kwabafundi kuphazamiseke ukufunda.
Enye inkinga ngeyokuba ngomathandizinto, neholela ekubeni umfundi aziphonse ezimpisini ezingamadoda amadala okuthi- wa ngama “blesser”.
Lowo owehla enyuka nalezi zimpisi lisuke selilimele ikusasa lakhe, kokunye hhayi nje kwezemfundo kuphela kodwa nokuthi uyophuma asebenze kuphi uma isiphazamisekile imfundo okuyiyona abeyiyele esikoleni.